We Fight We Win. -- " More than Media ": FTUB နဲ့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရင်း ထောင်ကျခဲ့တဲ့ ဦးတင်လှ
FTUB နဲ့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရင်း ထောင်ကျခဲ့တဲ့ ဦးတင်လှ
မီးရထား ၀န်ထမ်းတွေကို သွားစည်းရုံးပြီး သမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပေးဖို့ သွားတဲ့ ခရီးစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ မထင်မှတ်ဘဲ FTUB က မီးရထားသမဂ္ဂဖွဲ့ ခိုင်းလို့ 
FTUB နဲ့ ချိတ်တွဲ ဆောင်ရွက်ရင်း ထောင်ကျခဲ့တဲ့ ဦးတင်လှနဲ့ တွေ့ ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ က FTUB နဲ့ အလုပ်တွေ တွဲလုပ်ခဲ့သူဆိုတာပြောပြပြီး သူ့ ကို
ထောင်ကျစဉ် NLD ပ့ါတီကသာ ထောက်ပံ့စရိတ်ရြ့ပီး ftub က ယနေ့ထောင်က လွှတ်ချိန်ထိ မကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုတာ ပြောပြပါတယ်။ ယခု ဦးတင်လှမှာ ဆီးချိုကြောင့် ချက်ချင်း ခြေထောက်ြ့ဖတ်ရမဲ့ ကိစ္စရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ အစစအရာအရာ အခက်အခဲကြောင့် အသက်ကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်တာကို မြင်ရပါတယ်။
ချာ့ခ်ျကျောင်း လက်ဝါးကပ်တိုင် ဗလီ အစရှိတဲ့ လူနည်းစု ကိုးကွယ်ရာတွေကို ဖျက်ဆီးဘို့သိပ်တက်ကြွတဲ့ ဗမာတွေ ဒါမျိုးကျတော့ ဘယ်သူမှမရင်းရဲပါလား ဘယ်မှာလဲ NLD??